ယူနိုက်တက် နဲ့ လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးနေတဲ့ နည်းပြ ၊ အေစီမီလန် စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ ၊ ယူဗင်တပ်ဆီ ဘာစီလိုနာ ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ ကစားသမားတို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ယူနိုက်တက် နဲ့ လျှို့ဝှက်ဆွေးနွေးနေတဲ့ နည်းပြ ၊ အေစီမီလန် စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ ၊ ယူဗင်တပ်ဆီ ဘာစီလိုနာ ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ ကစားသမားတို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
January 12, 2022 January 12, 2022 - by Editor
PSG အသင်းရဲ့ နည်းပြ မော်ရီစီယို ပိုချက်တီနို ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းနဲ့ တိတ်တဆိတ် ဆွေးနွေး နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ပိုချက်တီနို ဟာ ရာသီအကုန်မှာ မန်ယူနိုက်တက် နည်းပြသစ် ဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းအစားဆုံး ဖြစ်နေပြီး ပရိသတ် ၊ အသင်းသားဟောင်းတွေ ရဲ့ ထောက်ခံမှု အများအပြားကို ရရှိ ထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အေစီမီလန် အသင်းကတော့ ယူနိုက်တက် ခံစစ်မှူး အဲရစ် ဘိုင်လီ ကို အငှားနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အေစီ ဟာ ရာသီကုန် အထိ နားရမယ့် ခံစစ်မှူး ဆိုင်မွန် ခါဂျာ ရဲ့ နေရာ အတွက် အစားထိုး ခေါ်ယူမှု ပြုလုပ်ဖို့ ဈေးကွက် ထဲမှာ ရှာဖွေ နေတဲ့ အသင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာ ကတော့ ဇန်နဝါရီ မှာ ငွေသုံး နိုင်ချေ ရှိပြီး ကစားသမားကောင်းတွေ ကလည်း အာဆင်နယ်ကို လာရောက် လိုစိတ် ရှိကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ထွက်ပေါ် နေတဲ့ သတင်းတွေအရ အာဆင်နယ် ဟာ ဇန်နဝါရီ မှာ အသင်းက ကစားသမား ၄ ယောက်လောက်ကို ရောင်းထုတ် သွားဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရိုးမား နည်းပြ မော်ရင်ဟို ကတော့ အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်လူ ဂရန်းနစ် ရှာကာ ကို ပြန်လည် စိတ်ဝင်စား လာတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ ကွင်းလယ်ကို အဓိက အားဖြည့် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ်လူ အာသာ မယ်လို ကို ချဉ်းကပ် နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးကြီး အော်ဘားမီးယန်း ကတော့ ကိုဗစ် ပိုး စစ်ဆေးမှုမှာ ထပ်မံ တွေ့ရှိ နေသေး တာကြောင့် ဂါဘွန် အသင်း နဲ့ လေ့ကျင့်မှု မပြုလုပ် နိုင်သေးဘူးလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဖက်ဒရီကို ချီယေဆာ ကာလရှည် ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားမှုကြောင့် တောင်ပံ ကစားသမား လိုအပ် လာနိုင်တဲ့ ယူဗင်တပ် အသင်းထံ ဘာစီလိုနာ က မမ်းဖစ် ဒီပိုင်း ကို ခေါ်ယူဖို့ ဆန္ဒ ရှိသလား လို့ မေးမြန်း စုံစမ်း ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ရဲ့ ပြင်သစ် တောင်ပံ ကစားသမား ကင်းစလေ ကိုးမန်း ကတော့ အသင်း နဲ့ ၂၀၂၇ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ စာချုပ်သစ် အရ ကိုးမန်း ဟာ ဘိုင်ယန် ရဲ့ တတိယမြောက် လုပ်ခ အများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာတယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ အသင်းကတော့ အဲဗာတန် နောက်ခံလူ လူးကပ်စ် ဒင်း အတွက် ပေါင် ၂၅ သန်း နဲ့ သဘောတူညီ ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကာ လာမယ့် ၂၄ နာရီ အတွင်း ကြေညာ သွားဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဗီလာ ဟာ လူးကပ်ဒင်း နဲ့ ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို တို့ကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲမှာ ထည့်သွင်း ကစားနိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
လီဗာပူး နည်းပြကြီး ယာဂင် ကလော့ ကတော့ မိုဟာမက် ဆာလာ ဟာ အသင်းမှာ ဆက်နေလိုပြီး စာချုပ်သစ် ကိစ္စ ဟာလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေး နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နာပိုလီ တိုက်စစ်မှူး ဗစ်တာ အိုဆင်ဟမ်း ကတော့ အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်း ကို ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ပြန်လည် စတင်နေပြီလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
နာမည်ကျော် စူပါ အေးဂျင့် မီနို ရွိုင်းအိုလာ ဟာ ဒီကနေ့ မှာ ရုတ်တရက် ဆေးရုံ တက်ရောက်ပြီး အရေးပေါ် ခွဲစိတ် ကုသမှု ခံယူ ခဲ့ရတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဘာအကြောင်းအရင်းလဲ ဆိုတာ ကိုတော့ မသိရှိရ သေးပါဘူး ။
Previous Article လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ ဟာဗေး အယ်လီယော့ က လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်ဆင်းတော့မယ်လို့ အချက်ပြလိုက်တဲ့ ကလော့ပ်
Next Article တူချယ်လက်ထက် ခြင်္သေ့ပြာတို့ ဗိုလ်လုပွဲ ၄ကြိမ်တက်ခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ် ၀ – ၁ ချဲလ်ဆီး ( ၂ကျော့ပေါင်း ၀ – ၃ ) ပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings )